Prepar3D Ka caawi
Prepar3D Ka caawi sano 3 6 bilood ka hor #19
Haddii aad la kulanto dhibaatooyin, khaladaad ama haddii aad waxoogaa su'aalo ah oo ku saabsan Prepar3D Simulator, halkan ku dhaji. Sidoo kale noo sheeg wax ku saabsan hagaajinta iyo xalalka dhibaatooyinka kala duwan iyo khaladaad ku jira qalabkan.
Prepar3D Ka caawi sano 3 5 bilood ka hor #64
Ugu horreyntii waxaan rabaa inaan kuu hambalyeeyo shaqadaada weyn ee aad qabato.
Dhowr maalmood kahor waxaan bilaabay inaan isticmaalo "P3D V3.4 ", Muuqaalkii ugu horreeyay ee lagu rakibay wuxuu ahaa" Balearic Island "waxaanan arkay dhibaato xagga kor u qaadista dhulka ah ee LEMH iyo dhibaatada meesha ka jirta LESL.
Prepar3D Ka caawi sano 3 5 bilood ka hor #65
Waxaanu sameyn doonaa sida ugu fiican ee aan kuugu caawin karno arrintaan. Muuqaalkaas, miyaa la soo dejiyey foomka halkan ama meel kale?
Prepar3D Ka caawi sano 3 5 bilood ka hor #67
Waxaa laga soo daabacay boggan. Jasiiradda Balearic V2.
Prepar3D Ka caawi sano 3 5 bilood ka hor #77
bogaadin badan oo shaqadaada ah, waa 'qalab aad noogu fiican! Qaar baan dhibaato ka qabaa add-on, tusaale: Xirmooyinka Duulimaadka badan ee 'Airbus A300'; Waxaan ku rakibay buugga 'Microsoft Fs', oo si fiican ayey u shaqeysaa. Hadda, waxaan jeclaan lahaa inaan ku rakibo isla xirmo gudaha P3D kaas oo ku yaal isla faylasha Barnaamijka (x86) sidoo kale, laakiin aaladda 'autoinstaller' ma ii oggolaaneyso inaan doorto P3D. Sikastaba, waxaan ku rakibay kuwa kale oo badan Rikooo labada Sims; maxaa jira Waad ku mahadsan tahay kaalmadaada
Prepar3D Ka caawi sano 3 5 bilood ka hor #81
Diyaaraddaan baan geliyey FSX oo aad bay u wanaagsanayd.
Ma aqaano qeybta farsamada ee P3D laakiin, waxaa suurto gal ah inaad isku khilaaftaan labadan sims. Waxaan ku arkaa sawirada aad soo bandhigtay inaad labadiinaba isku rakibteen isla goobtii ... maahan wax xun inaad ku rakibtid kumbuyuutarro adag oo kala duwan, haddii aad sidaa u yeeli kartaan.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.339